The Ultimate Guide to the Best Pizza na Manhattan - Nri
The Ultimate Guide to the Best Pizza na Manhattan
Ultimate Guide Best Pizza Manhattan
Ọ bụrụ na e nwere otu nri na-etinye New York na map (tupu niile fancy celebrity chefs ebe a), ọ bụ Pizza. O siri ike na-ezighị ezi na ihe ọ bụla iberi na obodo a-ọma, e wezụga ndị 99 & cent; nkwonkwo Pizza, nke bụ azịza zuru ezu-mana ụfọdụ achịcha na-arị elu karịa ndị ọzọ. Ya mere, anyị nwalere, nwaa, Yelp-enen ma kpọọ ụmụ akwụkwọ ochie ochie nke New York ka ha wetara gị njem kacha mma Pizza Manhattan izza * RuPaul olu *… Nke gị ndụ . (Ma echegbula, mpụga-boroughites. ’Re na-esote.)
Njikọ: 12 NYC talọ oriri na ọ Thatụ Thatụ nke na-eme ka obi dị gị ka ịnọ na Europe
Basilkeho Artichoke''s Pizza
B DONGH--EFF-NA-’EM KLASISI
Ka anyị mee mmadụ ole na ole ekwenyeghi-igwe okwu n’obi. N'ezie, ọ bụrụ na ịnweghị ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ala, anyị ga-arịọ gị ka ị nyeghachi kaadị gị New Yorker ziri ezi ugbu a.
Enwere chi Prista Street Pizza —Ndị Nolita na-enweghị mgbagha nke ndị New York ka na-akwụ ụgwọ maka; Nke John icheku ọkụ, mma-brik ịdị mma na Bleecker Street; Joe si , ihe quintessential New York nke ahụ bụ akụkụ nke West Village kemgbe tupu a mụọ gị; Atịchok Basille ’ s (nke amara dị ka Artichoke gburugburu akụkụ ndị a) nwere ofe, ofe atịchok-obi na ncha akwụkwọ nri nke nwere ike itinye gị na coma; na Roberta si , nke n'agbanyeghị agbanye mgbọrọgwụ ya na Brooklyn, ka na-eme ọmarịcha elu maka ogige abụọ Manhattan ya n'etiti obodo.
Amadeus ama ama
Pizza Abali Abali
Mgbe a bịara na iberibe ntụpọ na-agbachapụ mmanụ, -eyey gooe gbazee mozzarella na pizza crunchy pizza New York bụ onye ama ama, NY Pizza Kachasị Elu , nke dị nso na Penn Station, na-enwe ahịrị ụzọ na ụyọkọ toppings ịhọrọ site na. Coronet na Morningside Heights na-eme mmezi-nnukwu Mpekere ndị dị oke egwu, otu iberi na-adabaghị na tray plastik. N'akụkụ nke ọzọ nke ogige ahụ, Eze Pizza nke Harlem dikwa nma legit too.
Ma anyị achọghị ịma nke mbụ bụ Little Italy-ma ọ bụrụ na ịchọrọ iberi na etiti obodo, ma ọ bụ ọnọdụ (na 43nd ma ọ bụ Nke 45 ) ga-enye nri ehihie, hungover-at-your-desk lunch nke ọ bụla ọzọ. Ikwu okwu banyere mmanya pizza, Amadeu ama ama s's ebe abụọ dị n'etiti etiti na-enye afọ ojuju, carb-heavy slice with a slight thicker (but not too thick!) Crust to hold extra sauce, cheese and toppings. Ha nwekwara iberibe ọkụkọ buffalo akpọchiri akpọchi nke ga - eme ka ire gị gbaa ọkụ. (Daashi: Ọ na-ede ya ebe a na-azụ nri.)
Site n'ikike nke Bocce
Ọ D MMA, ugbu a maka ihe dị elu. Know mara, dịka ọmarịcha ọmarịcha osisi a na-ere pizza nwere chaọkụ ọka dị ka ị buru ụzọ rie na Naples maka € 10 (gụnyere mmanya).
Ọkwá USQ bụ nna ukwu pizza siri ike Neapolitan siri ike nke na i nwere ike iri iberibe nde asatọ. (Ma mgbe ịmechara ịtinye mkpịsị aka gị mmanụ oliv, enwere ụlọ ikpe dị n'èzí iji gbaa ụfọdụ calorie ọkụ.) Anyị na-ele mmadụ anya n'ihu Sorbillo na Bowery, ebe Buffalo daisy chịa ike; Farinella Italian Bakery, nwere ebe atọ na-eje ozi palam (yabụ, ịkekọrịta ụdị ụdị egbutu); na Ribalta's bubbly namesake pie with mozzarella, soseji andtali na broccoli rabe nke ahụ bụ ihe eji eme pizza nrọ. Mmanụ na Pi na West Village na-enyekwa Pizza Neapolitan dị ụtọ (na ụfọdụ ndị na-ekiri kpakpando).
Ihe ndi ozo iji mee ka chiiz gi banye na otu a? Otu na East Village, Arturo si na Houston na Rubirosa na Nolita, nke nwere ụfọdụ nke kacha mma nhọrọ ndị na-enweghị gluten n'obodo.
Molly Tavoletti / elu Pizza
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na Town
Anyị na-akpọ ya ugbu a: ụdị pizza ndị Rome na-eme na Gotham. Anyị na-ekwu maka otu nnukwu iberibe iberibe iberibe iberibe achịcha na-adịghị mma ma ọ na-adịkarị nro n’ime.
Ileba anya: gbazee-n'ọnụ gị n'ọnụ ụzọ mpekere na Alla Pala Pizza & Enoteca , Pizza na Eataly Flatiron. E nwekwara PQR na Upper East Side, nke a ma ama mara mma (n'ezie, n'ezie ama) Roman pizza ukwu.
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, Noam Grossman nke Dig Inn na onye ndụmọdụ Pizza nke Roberta Anthony Falco na ndị 2 Bros. nwe Eli na Oren Halali jikọtara na nso nso a. Upside Pizz ka na etiti obodo. Can nwere ike ịtụ anya na emelitere, ụlọ akwụkwọ ochie 90s-style Pizza parlor vibes, ya na mozzarella nke a na-arụ n’ụlọ, soseji, ose na-atọ ụtọ na nke akpọrọ akpọrọ nke ọma n’ihe ọdịnala na gburugburu nke Sicilian.
mmeghari afọ ojuju n’ụlọ
Njikọ : 14 Legendary NYC talọ oriri na ọendụ Legụ iji tinye na ndepụta ịwụ gị
esi gbochie dandruff na ntutu ịda
ọgwụgwọ ụlọ maka ntutu dị okpotokpo
akwụkwọ na nkuzi ndụ
mmeghari afo na ulo
ihunanya Hollywood ndepụta nke ndepụta
egwuregwu kacha mma maka nwanyị leo